Kulesi sihloko, sizokutshela ukuthi ukukhetha efulethini kwesokudla esakhiweni esisha ngo Sochi futhi Adler emadolobheni, kanjani ukusindisa, kodwa qinani ngekhwalithi. Yini predlaget ingcebo market ngo Sochi namuhla? Iyiphi inkampani ukusebenzisa?
Le nkampani "Onyx" - iyona enkulu kunazo zonke ingcebo ejensi e Sochi namuhla. Phakathi umsebenzi ayemahle, kanzima, asigcini nje efanelwe ukwethenjwa inqwaba amakhasimende, kodwa futhi lanwetshwa kwenkululeko enekhono, wawuhlwitha nakho omkhulu.
Abasebenzi bethu - kungcono consultant abanolwazi emikhakheni ehlukahlukene ingcebo. Thina ngokuphumelelayo ukweluleka onjiniyela, abanikazi kanye nabasebenzisi lwezindaba ingcebo ezifana: bethenga, bethengisa noma ukuqasha impahla; ekhangayo ukutshalwa kwezimali; yemakethe.
Ngakho, ukuze ukhethe efulethini kwesokudla, kufanele ubheke indawo onyx-realty.ru. Kuleli sayithi ungathola efulethini Sochi yonke ukunambitheka kanye nesabelomali. Kuleli sayithi uzothola evame ukubuzwa, kodwa uma kodwa nokho alukho uhlobo yokuthi udinga futhi ungakwazi ukuthola isixazululo, bese niyayeka futhi emva kwemizuzwana 23 uyakubiza igama layo ngokuthi opharetha bese eluleka embuzweni wakho noma ukusiza ukuthola indawo e-Sochi inombolo yakho yocingo intengo engcono.
Futhi indawo onyx-realty.ru inikeza amafulethi akuzona kuphela Sochi, kodwa futhi Adler. Mina khawuleza ukukhumbuza ukuthi "Onyx" - akulona isayithi kuphela search ezindlini e izakhiwo ezintsha, kodwa futhi inkampani ukwakhiwa, okwamanje iyachuma ngokuphepha.
Manje sikhuluma okuncane mayelana technical support. Wena njalo ukuphendula ngokushesha, ungenawo oke ezimbi futhi akusize ukukhetha indawo esakhiweni esisha ngo Sochi at the best amanani.
Ngicabanga ukuthi kufanele ukhulume ezindaweni suburban. Yebo, inkampani waziphatha ONIX nezindawo suburban. Land - ingenye eziza kuqala lenkampani, isiqephu sezwe eyenza umnikazi yayo nenkululeko ukufeza amacebo abo. Kusayithi, ungakwazi ukwakha indlu bona noma ukuze iqashwe, ungakwazi bahlanganyele ukutshalwa engadini kanye ikhishi ingadi.
Onyx Le nkampani futhi ethengisa izakhiwo zebhizinisi, okungukuthi, ibhizinisi, ezakhiweni zamabhizinisi ehhovisi, ngisho wonke amapaki ezokuzijabulisa, kukhona ihhotela noma indlu ukuze iqashwe.
Le nkampani inikeza Cottages ngomumo eyenziwe ekhaya amanani ezingabizi, ngemali ephansi kakhulu ngabo, futhi kuba maphakathi Sochi futhi Adler.
Ngamafuphi: inkampani "Onyx" isikhathi eside emakethe futhi sazibonakalisa onesandla umhlabeleli, ukuthemba wakhe.
Anime "Ingelosi beats": izinhlamvu, izincazelo, ukubuyekezwa nezilinganiso
Cape uMarian - Nature Reserve ka elisogwini oluseningizimu ye-eCrimea. Izithombe kanye nokubuyekeza.
Yezandla kusuka Rowan: eyigeza, ukunambitheka emihle kanye energy oqondile